Dabeylo bus wata oo ku dhuftay Beijing iyo waqooyiga Shiinaha - BBC News Somali
4 Maajo 2017
Image caption Dabaqyada dhaadheer ee Beijing
Duufaan bus wadata ayaa ku dhufatay qaybo badan oo ka tirsan waqooyiga Shiinaha oo ay ku jirto caasimadda Beijing, iyadoo la filayo inay dalka saameeyaan dabaylo kale.
Caddaymo rasmi ah oo la helay ayaa muujinaya in wasakhda la socota hawada ay ka sarayso heerka jaangoysay Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO.
Maamulka ayaa kula talinaya dadka deegaanka inay ka fogaadaan dhaqdhaqaaqyada bannaanka iyadoo carruurta iyo dadka waayeellada ahna lagula talinayo inay guryaha ku negaadaan.
Dabeysha ayaa ka soo kaceysa dalka deriska la ah Shiinaha ee Mongolia iyo gobolka ismaamulka Mongolia ee dalka Shiinaha.
Maamulka magaalada ayaa sheegay in Beijing ay xaaladdan ku sii jiri doonto ilaa fiidnimada Khamiista isla markaana in maalinta dhan la dareemi doono waxyeelladeeda. Kumannaan duulimaadyo ah ayaa dib loo dhigay ama la baajiyay.
Image caption Carruurta iyo waayeelka ayaa loogu baaqay in ay guryaha ku nagaadaan
Warbahainta qaranka ayaa laga soo xigtay in saraakiishu ay sheegeen in dabeysha busta wadata ay bilowday inay ku sii baahdo Beijing galab-gaabadkii Arbacada, isla markaana ay magaaladoo dhan hareysay habeenkii.
Dadweynaha Shiinaha ayaa sidii caadiga u ahayd dareenkooda uga hadlay baraha bulshada.
"Dabeyl ciid wadata ayaa harqineysa Beijing. Waxaan dareemayaa inaan u dhowahay inaan kansarka sambabada qaado," ayuu yiri Sina Weibo.
Shiinaha ayaa gaar ahaan wajahayay dhibaatooyin wasakhowga hawada ah sanadihii dhowaa, gaar ahaan xilliga jiilaalka oo inta badan magaalooyinkeeda waqooyiga ku yaalla ay aad ugu tiirsan yihiin dhuxusha.